Danjire Yarmoto oo ka qeyb galay Shir muhiim ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Danjire Yarmoto oo ka qeyb galay Shir muhiim ah
Tuuryare 7 September 2019
Wakiillo ka socda Howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ka qeybgalay munaasabad xiritaan tababar shan maalmood qaatay oo ku saabsan la-dagaallanka wareeginta lacagaha si aan sharci ahayn iyo maalgelinta argagixisada. Tababarka waxaa maalgeliyey Xafiiska Caalamiga ah ee la dhagaalanka Maandooriyaha iyo Arrimaha Sharci Illaalinta (INL) ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka waxaana fuliyay Ururka Caalamiga ah ee Horumarinta Sharciga (IDLO).
Kaqeybgalayaasha ka socda hay’adaha Soomaaliyeed ee ay khusayso ka-hortaga wareeginta lacagaha si aan sharci ahayn iyo maalgelinta argagixisada waxay fursad u heleen inay iskaashi sameeyaan oo ay ballaariyaan aqoonta iyo xirfadaha looga baahan yahay la-dagaallanka arrimahan adag.
In ka badan 30 xubnood oo ka tirsan waaxda caddaaladda ee dambi baarista ee Soomaaliya ayaa maanta ku biiray in ka badan 300 oo horey u qalinjabisay kuwaasoo dhammeystay tababbar ku aadan baaritaanka iyo dacwad ku soo oogista dambiyada culus.
Ujeedada mashruuca ee INL ay ku maal gelineso IDLO $2.2 milyan oo uu tababbarkani qayb ka ahaa ayaa ah mid lagu la dagaallamayo dambiyada culus, inuu gacan ka geysto ka taageeridda hawlwadeenadda Soomaaliyeed si loo xoojiyo awoodda hay’addaha iyo waaxda caddaaladda ee Muqdisho iyo Maamul Goboleedyada si ay u maxkamadeeyaan, u difaacaan, uguna xukuntaan dambiydda culus, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xadidnayn, argaggixisannimada, musuqmaasuqa, iyo Tacadiyadda Ku Salaysan Jinsiga.
Mareykanka waxaa uu muujinaya ka go’anaansha taageeradda Soomaaliya, gaar ahaan kobcinta awooda heerarka Federaalka iyo heer Maamul Goboleed si loo helo cadaalad wax ku ool ah– kaasoo gundhig u ah nidaam kasta oo ka shaqeeya cadaaladda.
US envoy to Somalia attends anti-money laundering course
International partners welcome Galmudug Reconciliation